Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullahi Deni oo soo doortay golihiisa cusub ee wasiiradda - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMadaxweynaha Puntland Siciid Cabdullahi Deni oo soo doortay golihiisa cusub ee wasiiradda
February 10, 2019 Puntland Mirror Puntland, Somalia 1
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Dowladda Puntland Siciid Cabdullahi Deni ayaa soo doortay golihiisa cusub ee wasiiradda, sida lagu digreeto kasoo baxday xafiiska madaxtooyada caawa saq dhexe.
Golaha cusub ayaa ka kooban 18 wasiir iyo ku xigoonadooda iyo sidoo kale 9 wasiir dowle.
Halkan ka akhriso liiska goolaha wasiiradda cusub.
February 16, 2019 Baarlamaanka Puntland oo meelmariyay golaha wasiiradda cusub
Abdikadir Barre yusuf says:
Mudane, madaxweyne adiga oo mahadsan. Codsi Cabasho .
Aniga oo ah, bulsha waynta ee gobolka bari gaar ahaan degmada ufayn, oo ah Deegan balaaran lehna khayraad dabiici ah ahna Deegan strategy ah dadkiisa ay dalka u hureen naf iyo maal necebna cadowga puntland, waxaan ka dhex wayey golaha wasiirada cusub, waxaan u malaynayaa waad ilowday in ay jiraan dadkaas iyo dalkaas. Haddaba waxaan si xushmad leh kaga codsanayaa in aad gobolka bari ku sharafto